Ny rindranasa fandraharahana Android dimy tsara indrindra | Androidsis
Ny fampiharana fandraharahana tsara indrindra amin'ny Android
Rehefa manomboka orinasa dia foana mahafinaritra ny manana fitaovana betsaka araka izay tratra hanampy anay amin'ny fitantanana ny orinasa. Ny ampahany tsara indrindra dia ny hoe tsy mila mandany vola be ianao hanampiana ny orinasanay. Manana fitaovana Android fotsiny. Manana rindranasa maro izahay izay hanamora ny fiainantsika.
Fampiharana izay hanampy amin'ny fanatanterahana asa sasany. Amin'ny fomba tsotra ary tsy mila teti-bola lehibe. Vonona ny hahafantatra ny rindranasa tsara indrindra ho an'ny orinasa hitantsika amin'ny Android?
Safidy fampiharana izay mitady hanampy anao amin'ny sehatry ny orinasa isan-karazany. Saingy, izy rehetra dia tena ilaina tokoa. Inona avy ireo rindranasa hita ao anaty lisitra?
1 Saina tsotra
Fangatahana ho an'ireo izay manana hevitra ara-barotra izy ireo, saingy mbola tsy natomboka niaraka taminy. Raha mbola manana fisalasalana na tsy mahalala ianao ny fomba fandaminana ny hevitrao, Simple Mind no vahaolana. Ity fampiharana ho an'ny Android ity dia mamela anao mamorona sarintany saina. Ka amin'ny fomba tsotra sy tena hita maso no hahafahanao mandamina azy ireo amin'ny fomba ahazoana aina mampivelatra azy ireo.
Mety ho tena ilaina koa izany raha manana orinasa ianao. Indrindra rehefa miresaka mamolavola tetikasa na hevitra amin'ny ho avy. La Maimaimpo ny fisintomana maimaimpoana.
SimpleMind Lite - Sarintanin'ny saina tsy miangatra
Developer: Fitaovana ModelMaker
Fampiharana izay mety hain'ny ankamaroan'ny olona. Izy io dia fampiharana mamela antsika mamolavola sy manao fanentanana amin'ny mailaka. Amin'izany fomba izany no ahafahantsika mampiroborobo ny orinasanay amin'ireo olona mampiasa ity sehatra ity. afaka mandrindra fanentanana, na mandehana fampiroboroboana manokana. Safidy manome safidy maro antsika io. Raha mampiasa azy tsara isika, Mailchimp dia iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra misy.
La maimaim-poana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Ka raha mitady fitaovana hampiroborobo ny orinasanao ianao dia ity no mety indrindra.
Mailchimp: Marketing sy CRM ho an'ny orinasanao
Fampiharana mamela antsika mamorona naoty momba izay rehetra ataontsika mandritra ny andro na izay tokony hataontsika. Azontsika atao koa ny miresaka amin'ny fifandraisana. Ka mety ho fomba tsara hamoronana a fantsom-pifandraisana amin'ny mpiasa hafa. Noho izany, tsy afangaronay ny fandraharahana amin'ny fampiharana toa ny WhatsApp izay natao hampiasaina manokana.
Mety satria afaka mamonjy resadresaka sy manana ny bokim-bokintsika manokana isika. Toy ny fampiharana teo aloha, maimaim-poana ny fampidinana Slack.
Iray amin'ireo safidy tsara indrindra azontsika jerena ankehitriny mandrindra asa. Manolotra antsika i Trello mamorona asa. Amin'ny fomba ahafahantsika mamorona asa ho an'ny tenantsika na ho an'ny olon-kafa. Fa inona no mamela antsika mitantana tetik'asa na asa rehefa mandeha ny fotoana. Fantatsika izay tokony hataon'ny tsirairay avy.
Mety amin'ny mandrindra ekipa ary mitantana drafitra maharitra sy salantsalany. Iray amin'ireo fampiharana fitantanana tsara indrindra ho an'ny Android. Ankoatr'izay, ny interface misy azy dia tena tsotra sy intuitive. ny maimaim-poana ny fampidinana Trello amin'ny Google Play. Azonao atao ny misintona azy eto ambany.
Holded dia iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra kendrena hitantanana orinasa. Ho fanampin'izay, manolotra antsika izy io vahaolana rahona. Noho izany dia manana safidy maro azo atao izahay. Ahoana no fomba fehezo ny faktiora, CRM na koa ny lisitr'ireo orinasa. Noho izany dia misy safidy maro azo atao ao amin'ity rindranasa ity. Ny iray amin'ireo tombony lehibe dia ny mamela antsika ampidiro ny rindranasa toa ny PayPal, Shopify na Amazon.
Afaka manao izany isika tantano ny sehatry ny asa aman-draharaha sy ny fifandanjana amin'ny fomba tsotra avy amin'ny fitaovantsika Android. Fitaovana toy izao no aloa, koa mila manadihady ianao ary azonao andramana maimaim-poana mandritra ny fotoana fohy. Azonao atao izany amin'ny anao Malagasy.
Ireo dia ny sasany amin'ireo fitaovana tsara indrindra misy ankehitriny hanampiana amin'ny fampandehanana ny orinasanay. Araka ny hitanao, afaka ny ankamaroany. Ka tsy mila mandoa na inona na inona ianao raha mila fanampiana kely amin'ny orinasanay. Mila mahita fitaovana mety fotsiny ianao hanampiana ny orinasanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny fampiharana fandraharahana tsara indrindra amin'ny Android
Ny Google Pixel XL 2 dia mandalo fitsapana fiaretana JerryRigEvery, hahavita izany ve?
Black Friday dia mamely ny Google Play Store amin'ny lalao 20 amidy mandritra ny fotoana voafetra